craft - Synonyms of craft | Antonyms of craft | Definition of craft | Example of craft | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for craft
Top 30 analogous words or synonyms for craft
နည်းပညာ နည်းပညာဆိုသည်မှာ ကိရိယာ (tool) နှင့် အတတ်ပညာ (craft) များကို သိရှိနားလည်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နည်းပညာသည် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဆိုပါပညာရပ်နှစ်ခုမှ ဆင့်ပွား၍ နည်းပညာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နည်းပညာ(Technology )ဟူသောအသုံးအနှုန်း၏ မူလအစမှာ ဂရိစကား"Technologia" ဖြစ်သည်။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ After S-IC separation, the S-II second stage burned for6minutes and propelled the craft to and 15,647 mph (25,182 km/h– 7.00 km/s), close to orbital velocity.
အပိုလို ၁၁ On July 20, 1969 the lunar module (LM) Eagle separated from the command module Columbia. Collins, alone aboard Columbia, inspected Eagle as it pirouetted before him to ensure the craft was not damaged.
ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ် Soyuz spacecraft were used to carry astronauts to and from Salyut and later Mir Soviet space stations, and are now used for transport to and from the International Space Station (ISS). At least one Soyuz spacecraft is docked to ISS at all times for use as an escape craft in the event of an emergency.
လယ်ရီ အယ်လစ်ဆင် Adda Quinn နှင့် ၁၉၆၇ တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ တွင်ကွာရှင်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ တွင် Nancy Wheeler Jenkins နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ တွင် ကွာရှင်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ တွင် Barbara Boothe နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သား David နှင့် သမီး Megan တို့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ တွင် Barbara Boothe နှင့် ကွာရှင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ တွင် အချစ်စာရေးဆရာမ Melanie Craft နှင့် သူ၏ Woodside ခြံတွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Steve Jobs ( CEO of Apple, Inc ) က သူ၏မင်္ဂလာဆောင်တွင် တရားဝင်ဓါတ်ပုံဆရာအဖြစ် ကူညီပေးခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ် Tom Lantos ကကြီးမှူးကျင်းပပေးခဲ့သည်။
National Socialist black metal Darkened Nocturn Slaughtercult တီးဝိုင်းသည် NSBM တီးဝိုင်းများဟု ခေါ်သော တိကျသော ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချက်များကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ “ကျွနု်ပ်တို့ ဤ Bandwagon effect နှင့်ပတ်သက်၍ ဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူး’’ ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဤ အဆိုအရ black metal ရှိနိုင်ငံရေးမှာ မညီညွတ်သော စီမံဖန်တီးချက်သာ ဖြစ်သည်။ Fenriz သည် လူမှုအခွင့်အလမ်းများပပျောက်ရေး အတွက် ပါဝင်ဆင်နွဲစဉ်အဖမ်းခံရသော်လည်း Darkthrone တီးဝိုင်းသည် သူတို့၏ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ Craft တီးဝိုင်းမှ Joackim ပြောခဲ့သည်မှာ တကယ် black metal ထဲမှ အမျိုးသားရေးဆိုရှယ်လစ် ရောနှောထားသည် သဘောတရားရေးရာများလို့မထင်ပါဘူး။ သို့သော် label များထက်ပို ၍မသွားပါဘူး။ NS Black Metal ဟာ ဂီတအတွက် မတော်လျော်ဘူး လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ် Korolyov initially promoted the Soyuz A-B-V circumlunar complex ("7K-9K-11K") concept (also known as L1) in whichatwo-man craft Soyuz 7K would rendezvous with other components (9K and 11K) in Earth orbit to assemblealunar excursion vehicle, the components being delivered by the proven R-7 rocket.
အပိုလို ၁၁ After the crew of Apollo 10 named their spacecraft Charlie Brown and Snoopy, assistant manager for public affairs Julian Scheer wrote to Manned Spacecraft Center director George M. Low to suggest the Apollo 11 crew be less flippant in naming their craft. During early mission planning, the names Snowcone and Haystack were used and put in the news release, but the crew later decided to change them.